Roma oo Xajisatay Kaalinta Labaad ee Horyaalka Talyaaniga – Radio Muqdisho
Kooxda Roma ayaa xajisatay kaalinta labaad ee horyaalka talyaaniga ee Serie A-da,ka dib markii ay garoonkeeda Olimpico Stadium 1-0 uga badisay kooxda Napoli.
Ciyaaryahan Miralem Pjanic ayaa daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta goolka ay ku badisay u dhaliyay kooxda Roma.
Kooxda Napoli ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha tartanka ugu jiro u soo bixitaanka koobka Champions League-ga,inkastoo ay u dhaadhacday kaalinta shanaad ee horyaalka.
Kooxda Roma oo uu hogaamiyo macalin Rudi Garcia ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 56-dhibcood,halka kooxda Napoli ay horyaalka ka gashay kaalinta shanaad,iyadoo leh 47-dhibcood.
Kooxda Arsenal oo Ka Adkaatay Kooxda Liverpool "Sawirro"